उर्लाबारीमा मेयर फागो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच लफडा, मेयरबाट असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षा माग – Sawal Nepal
उर्लाबारीमा मेयर फागो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच लफडा, मेयरबाट असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षा माग
२०७६ भाद्र २७, शुक्रबार २०:०७ मा प्रकासित
विराटनगर । उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वार्टरमा ताला लगाएका छन् । मन्त्रालयले मागेको कागजात पठाउने विषयमा विवाद भएपछि उर्लाबारी नगरपालिका प्रमुख खड्ग फागोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीको क्वार्टरमा नगरप्रहरी प्रयोग गरी ताला लगाएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेको कागजात पठाउने विषयमा पाँच दिनअगाडि प्रमुख फागो र प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद भएको थियो । विवादपछि आफूलाई असुरक्षित महसूस गर्दै अधिकृत रेग्मीले उर्लाबारी छाडेका थिए । नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी भण्डारी क्वार्टरमा रेग्मीको परिवार रहेकै अवस्थामा ताला लगाएको आफूले जानकारी पाएको बताइन् । नगर प्रमुख खड्ग फागाे भने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले क्वाटर छाडेपछि सुरक्षाकालागि ताला लगाएकाे बताउँछन् । कार्यलय नअाएकाे विषयमा स्पष्टिकरण साेध्दा सामान्य भनाभन भएकाे उनले बताए ।
सुरक्षाका लागि रेग्मीले प्रशासन गुहारे
असुरक्षित भएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले आफ्ना लागि सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । प्रमुख फागोका कारण आफू असुरक्षित भएको भन्दै उर्लाबारी छाडेका रेग्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय माेरङमा सुरक्षा माग्दै निवेदन दिएका हुन् ।
आफूले भनेको नमानेको भन्दै प्रमुख फागोले रेग्मीलाई धाकधम्की गर्दै अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेको अधिकृत रेग्मीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । विवादपछि उर्लाबारी छाडेका अधिकृत रेग्मी विराटनगर बसिरहेका छन् । अधिकृत रेग्मीको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा माग गर्दै शुक्रबार पत्र आएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले उर्लाबारीमा आफूमाथि थ्रेट भएकाे विषयमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएकाे बताएका छन् । आफू असुरक्षित महसूस गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् शान्ति सुरक्षा माग गरेको बताउने उनी थप बोल्न चाहँदैनन् ।
कोरम नपुगी नगरसभा, आदेशपछि काम बन्द
कांग्रेसबाट निर्वाचत प्रमुख खड्ग फागो र नेकपाबाट निर्वाचित उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीबीचको विवादका कारण नगरको काम प्रभावित भएको एक महिना पुग्यो । २९ असारमा उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभा भएको थियो । १९ जना कार्यपालिका सदस्य रहेको नगरमा प्रमुख खड्ग फागोसहित नेपाली कांग्रेसका ६ जना सदस्यले निर्णय गरी चौथो नगरसभा डाकेका थिए ।
नगरकार्यपालिकामा नेकपाको १३ सदस्य छन् । तर, कांग्रेसबाट निर्वाचितहरूले अल्पमतका आधारमा एकलौटी रूपमा नगरसभा गरेको दाबीसहित उपप्रमुखसहित १३ जनाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्चले गत साउन २७ गते नगरसभाको निर्णय कर्यान्यन नगराउन आदेश दिएको थियो । अढाई करोड भन्दाबढी रकम प्रमुख फागोले आफूखुशी खर्च गरेको दाबी गर्दै उपप्रमुखले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा जवाफ मागेपछि विवाद बढेको हो ।
विवाद अदालतमा पुगेपछि साउन २७ गते उच्च अदालत विराटनगरले ऐनविपरीत भएको चौथो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि मेयरले सूचना जारी गरी काम रोकिएको बताएका छन् ।
उर्लाबारी नगरपालिकाको काम सुचारु गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अदालतले चौथो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि मन्त्रालयले तेस्रो नगरसभाको निर्णयकै आधारमा काम सूचारु गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन जारी भएपनि नगरको सेवा प्रवाह सुचारु भएको छैन् । मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि नगर कार्यपालिका बैठक बाेलाएकाे बताउँदै फागाेले बैठकबाट निकास निकाल्ने बताए ।साभार
६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अन्योल
रक्सी भट्टीबाट प्रधानाध्यापकसहित ६ जना पक्राउ
औषधि ब्यवसायी संघ झापाको अधिवेसनमा पदाधिकारीहरुमा कस्को कति मत ? हेर्नुहोस
औषधि ब्यवसायी संघ झापाको अध्यक्षमा दमकका गौतम गुप्ता बिजयी
दमकका गौतम गुप्ता औषधि ब्यवसायी संघको अध्यक्षमा अगाडि
गुण्डा नाइके साजन गुरुङलाई पक्राउ गर्ने क्रममा गोली चल्यो
शंकाले लंक जलाउछ अनि आफैलाई पिराउछ ! जसले अफिस जाँदा श्रीमतिलाइ बाँधे
व्यापारको क्रममा हुने ‘सेक्स’लाई कानुनी मान्यता
उर्लाबारी र दमकका लायन्स क्लवहरुको संयुक्त पदस्थापन हुँदै